Teza : “Omeo lanja ny fokonolona” | NewsMada
Teza : “Omeo lanja ny fokonolona”
“Any anaty fokonolona sy fokontany izany dahalo izany no mipetraka, fa tsy any an-danitra na any amin’ny afobe. Mahafantatra ireo olona ireo ny fokonolona, ary zanany no be dia be amin’ireo dahalo ireo.”
Izay ny fijerin’ny filoha nasionalin’ny Teza, Rakotoamboa Jean-Louis, manoloana ny antson’ny mpitondra fanjakana ny amin’ny tokony hanetsehana indray ny andrimasom-pokonolona handray andraikitra hiatrehana ny tsy fandriampahalemana tato ho ato, indrindra ny fakana an-keriny.
Raha omena vahana hanao dina araka ny tokony ho izy ny fokonolona, ary amboarina hifanaraka amin’izay ny lalàna mifehy ny fiarahamonina any ifotony: voafehy ny tsy fandriampahalemana.
Anjaran’ny mpitandro filaminana fotsiny ny manatevina ny fahaiza-manaon’ny fokonolona amin’izay fifehezana ny asan-dahalo. Fa tsy hoe tsy omen-danja sy vahana ny fokonolona, nefa ny mpitondra tsy mahavita izany fa midongy sehatra fotsiny. Hany ka voatery manao fitsaram-bahoaka ny olona.
Tokony homen-danja hitantana ny tany ny fokonolona
Hatramin’izao, tena ratsy tantana indrindra eto Madagasikara ny tany izay fitaovam-pamokarana, araka ny nambarany. Amin’izao haitao sy teknika vaovao amin’izao fotoana izao, mora refesina ny tany, raha ohatra ka omena lanja sy vahana ny fokonolona hitantana izany any amin’ny kaominina.
Hampandoavina hetra ny olona: 2 000 Ar isaky ny hektara, ohatra. Voaloan’ny olona izany, ary hitantana amina mialara ny kaominina tsirairay avy manerana an’i Madagasikara. Amin’izany, raha avadika ho vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ny fokontany, afa-mitantam-bola fa tsy toy ny amin’izao fotoana izao: ho voavaha avokoa ny olana amin’ny vola hamatsiana ny eny ifotony.